SHEEKO GAABAN! W/Q: Cabdulle Cabdikariin (Ugaas Jallaato) | Laashin iyo Hal-abuur
SHEEKO GAABAN! W/Q: Cabdulle Cabdikariin (Ugaas Jallaato)
Dhallinyarnimadu waa amminka ugu fiican ee qofkasta oo wadku daayo uu maro, muhiimadda ay dhallinyarnimadu leedahayna waa tan keentay, in maalinta qiyaamaha uu Ilaaheey SWT qofkasta waydiin doono waxa uu ku soo qabtay wakhtigiisii dhallinyarannimo. Diinteenna suubban waxa adduunka gaarsiiyay ee Rasuulkeenna (scw) garab istaagay, waxay ahaayeen dhallinyaro, adduunkana meel sare ka gaarsy Ilaaheey agtiisana maqaam fiican iyo milgeyn ka helidoona.
Si walba oo ay noloshu u adkaato ama xaaladdu u cakirnaato kuwa ay bulsho ku badbaadeysaa waa jiilka dhallinyaro ee ay haysato. Haddaba xilliga dhallinyarannimo waa intee? Inkasta oo aan baaritaanno ku samayn goorta ay isla wada yaqaannaan khubarrada caalamku, haddana waxaan ku gaabsanayaa xilliga u dhaxeeya 20 ilaa 40 sano jirka. Waxaase tusaale noogu filan heerka iyo awoodda ay dhallinyaradu leeyihiin guurowga Eebbe ha u naxariiistee uu ka tiriyey laashin: Maxamed Gacal Xaayoow, asiga oo yiri, mar uu dhallinyarad tilmaamayey:
Dhallinyaradu waligeedba waa, Dheeman iyo Luule
Dhaayaha wax lagu eego iyo, Dhumucdi weeyaane
Dhulka ubaxa lagu beeray iyo, Dhibicdi weeyaane
Dhafan-dhaafka howlaha kuwaan, Raadka dhugan weeye
Dhudhunkii afmaashiyo, Tacliin dhigata weeyaane
Waa wax dhir iyo foox uga udgoon, Waalidkii dhalayee
Dhisinka iyo udubkii la muday, Dhidibki weeyaane
Cadceed dhalatay waa dhalalac yiri, Dhoolki bari weeye
Dhaqankiyo siyaasada dhunteey, Dhab u tilmaamaane
Dheg xumadaya ceeba waqood, Umma dhibqaataane
Dhagar qabaha dhuunta u jaraa, Dhowla qowsadaye
Lafti dhabarka weeyoo dhextiil, Labada dhoonsaare
Dhiti duur ka baxa weeye iyo, Dhebagi toosnaaye
Dhiil la culaye dhaay lagu lisaye, Kuu dhedhemi weeye
Dhoombir culus risaas lagu dhacshee, Dhooba kala jeexday
Oo dhebedda howdkiyo ugaartuba, Ka dhiillootay
Dhiirranow libaax iyo shabeel, Dhirifsan weeyaane
Oo aan nin u dhedaystaya marnnaba, Dheefu sabanaynee
Dhabbaan xagal lahayn iyo hallood, Khayr u dhaca weeye
Dhiigtaar xididda yeeshoon caqliga, Loogu dhicin weeye
Horseed dhaba dhufays lagu gambado, Dhuumashadi weeye
Dhallinyarada soomaalideey, ugu dhaxaysaaye
Aniguna dhankaan ka cuskadaan, Dheelli tirayaahee.
Dhallinyarta soomaliyeed inkasta oo ay kala yihiin kuwo waddanka gudihiisa jooga xaalad kasta oo ay ku qabaanba iyo kuwo qurbaha u soo baxay. Haddana way iska xaalqabaan dhammaantoodba. Sidoo kale, dhallinyarada soomaaliyeed badankoodu waa kuwo wax aqrin kara, waxna qori karaz gaar ahaan luqadda soomaaliga, qayb badan oo ka mid ahina waa kuwo dhammeeyay dugsiyada dhexe, kana warqaba xaaladaha isbeddelaya ee adduunka ka jira. In badan oo jaamacadaha waddanka gudihiisa ku yaalla iyo kuwo jaamacado dibadda ah soo dhammeeyayba.
Isla mar ahaantaana meesha kama maqna dhallinyaro badan oo cilmiga diiniga ah ku darsaday barashada cilmiga maaddiga. Haddaba dhallinyarada soomaaliyeed intooda badani waxay ka siman yihiin inay qolyar ugu wada xiran yihiin aragtida iyo ficillada siyaasi hunguri raac ah oo aan isaguba go’aannadiisa siyaasadeed aanay gacanta ugu jirin, goor iyo saacad kastana la filayo inuu ka baxo ballan qaadyada uu saammeeyo, amminnada ay ku jiraan ololaha ay bulshada ku beerlaxawsadaan! Taas oo mar walba keenta in dhallinyarada hankoodu uu si fudud u burburo. Haddaba aniga oo aan dhowr sader ku soo koobi karin ka hadlidda arrimaha dhallinyarada, waxaan idin waydiin lahaa dhowr su’aalood, ku waas oo kala ah:
Dhallinyaro ilaa iyo goormaad ku qanacsan tihiin inaynu qol yar ugu xirnaanno siyaasiga hunguri raaca ah iyo suldaanka uu wato?
Inkastooy dhallinyarada maantu ay ku soo hagaageen goor ay bulshadii soomaaliyeed kala firdhanayso! Haddana haddii la kufo oo la jabo waxa roon in la kaco oo la dhutiyo, goormee ayey noqon doontaa baad isleedihiin goorta ay dhallinyaradu si sax ah u buuxin doonto doorkoodii dhallinyarannimo, maadaama baahi tirobeel ah loo qabo maanta?
Warcelinta labadaas waydiimood, waxa aan ka sugayaa dhallinyarada soomaaliyeed ee sheekadaan gaaban aqrisan doonta, isla markaana waxaan kusoo gebagebeynayaa guurowga sare ku xusan oo aad u dheer qeyb yar oo ka mid ah:
Ma dhallaalo weligii dhafoor, Murugu haydaaye
Ma dhiigaysto neefkii ku dhala, Dhadiga jiilaal’e
Dheygaggeey tacliintuu qabeen, Dhimatay yoomkaane
Dhismadii iskoollada intii, Laga ma dheerayn’e
Dhammastii la dhigay iyo ishii, Dhayda laga saaray
Dhaawocow gumaystuhu ku dhigay, Dhiibi kici wayday
Afkaa looga dhiiqsaday markeey, Dhab u irmaanaatay
Dharaaraha mid baa lagu ledaa, Dhowrashada guud’e
Marbaa dhaxanta geed laga dugsado, Dhacaru fuushaaye
Marbaad dhaxalka wiil looga boxo, Dhabarka saartaaye
Dhukaanka iyo gaajada marbaad, Dhogor gaddootaaye
Marbaad dhedaya neecaaw qabow, Laabta dhigataaye
Marbaad dhiirri uga aarsataa, Dhugus waraabaahe
Marbey dhacantu oodaha hortood, Dan u dhammaataayee
Iyagoo debkay dhilinayeen, Dhuxushi qiiqaydo
Dhambaalkii nabsiga baa ku dhacay, Ciidankuu dhurane
Hubkeey soo dhifteen weeraybey, Dhagac ku siiyaane
In kastoon wax loo dhimin dadkey, Dhinac ka raaceene
Dhallinyaradi hiyi dhaaftay baa, Taladi loo dhiibay
Shacabkii la kal dhowri jiray, Dheef wadaag noqoye
Aniguna dhallaan meyska dhigay, Dhowr habeen jirayee.
W/Q: Cabdulle Cabdikariin (Ugaas Jallaato)